‘Noterena Hisotro Ny Amaniko Aho’: Noafahana Taorian’ny 647 Andro Tany Am-ponja, Saingy Tsy Ho an’ny Rehetra Izany” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2016 6:52 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, English, Español, English
Sarin'i Zelalem Workagegnehu avy amin'i Melody Sundberg. Nahazoan-dalana.
Tamin'ny 15 Aprily 2016, noafahan'ny Fitsarana Avo Federaly Etiopiana madiodio ireo lehilahy roa, Yoantan Wolde sy Bahiru Degu, izay nigadra 600 andro mahery tany am-ponja noho ny fiampangana azy ireo ho nanao fampihorohoroana ary nolazain'ireo mpitsikera fa noho ny antony ara-politika.Tsy mba tsara vintana kosa i Zelalem Workagenehu, lehilahy fahatelo. Voaheloka izy ary hivoaka amin'ny 10 May ny didy fanamelohana azy. (Tamin'ny 26 Aprily, nandefa fanambarana hanenjanana ny sazy tany amin'ny fitsarana ny mpampanoa lalàna, ary nangatahana i Workagenehu mba hameno taratasy fanalefahan-tsazy ho azy.) Mpiaro ny zon'olombelona i Workagenehu ary manam-pahaizana tsy tapaka mandray anjara ao amin'ny tranonkala tantanin'ny olona iray avy any am-pielezana DeBirhan.
Samy voampanga teo ambanin'ny lalàna miady amin'ny Fampihorohoroana ao Ethiopia, izay nolaniana tamin'ny volana Jolay 2009 izy telo ireo. Niaro ny lalàna ny manampahefam-panjakana, ary nilaza fa nalain-tahaka tamin'ny lalàna misy eo amin'ireo firenena tahaka ny Fanjakana Mitambatra (Britanika) izany.
Navotsotra i Wolde sy Degu rehefa tany am-ponja nandritra ny 647 andro, efa ho roa taona, izay mampiseho vaovao malaza manahirana ao Ethiopia fa gadraina mandritra ny fotoana ela be tsy mandalo fitsarana ireo gadran'ny fanehoan-kevitra.
Amin'izay hita miharihary fa fampisehoan-kery, nisambotra indray an'i Wolde sy Degu ny mpitandro ny filaminana manao fanamiana sivily fotoana fohy taorian'ny nivoahan'izy ireo ny fonja tamin'ny 18 Aprily. Notanana nandritra ny alina tao amin'ny Fonjaben'i Maekelawi izy roa lahy, ary navotsotra indray sy nampitandremana fa mbola araha-maso izy ireo. “Hovonoina izy ireo raha misy fihetsika kely ataon'izy ireo” hoy ny havan'izy ireo.
Voampanga voalohany tamin'ny Oktobra 2014 i Workagenehu, miaraka amin'ny vondrona voampanga sivy hafa ahitana mpiserasera, mpanao politika mpanohitra, sy mpikatroka. Hatramin'izao, olona fito ao anatin'izany vondrona izany no afaka madiodio rehefa tany am-ponja nandritra ny herintaona mahery, ary avy eo nasaina nanasonia izay hitan'izy ireo ankehitriny fa fiaikena hosoka, mba ho afa-mandositra amin'ny fampijaliana bebe kokoa.
Ny fiampangana an'i Workagenehu dia ahitana fitarihana fikambanana mpampihorohoro (izay nahafahan'ny governemanta namaritra mihitsy ny Ginbot 7, antoko politika mpanohana ny demokrasia naorin'i Berhanu Nega), mikonokonona hanongana ny fitondram-panjakana, sy fanapariahana vaovao diso amin'ny alalan'ny tatitra ao amin'ny tranonkala tantanin'ny olona avy any am-pielezana. Ohatra, voarohirohy amin'ny raharaha ihany koa ny iray amin'ireo mpiara-manoratra amin'i Workagenehu ao amin'ny Bilaogy De Birhan.
Nihena ho roa taty aoriana ny fiampangana azy amin'ny raharaha: fitadiavana mpikambana hanomboka revolisioina tahaka ny Lohataona-Arabo ao Ethiopia sy fiarahana-manamora izay lazain'ny governemanta fa “hetsika fampiofanana hampihorohoroana ny firenena.” (nilaza i Workagenehu fa raha ny tena marina, dia toby fampiofanana hanorenana fifandraisana nomerika, media sosialy sy fitantanana izany.)
Voampanga ho nangataka handray anjara ao amin'ny toby fampiofanan'i Workagenehu i Wolde sy Degu, ary ahiahiana ho nanatevin-daharana ny Ginbot 7. (Nolavin'izy ireo ireo fiampangana ireo.)
Tamin'ny fitsarana azy, fantatra fa nilaza ny mpitsara fa ara-dalàna na ny fangatahana na ny fandraisana anjara amin'izany hetsika fampiofanana izany ka tokony ho afaka madiodio i Wolde ny Degu. Na dia efa tany am-ponja nandritra ny roa taona aza izy ireo, tsy mahazo mangataka onitra i Wolde Degu. Tsy mbola fantatra raha mikasa hitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana izy ireo.
Bahiru Degu, izay nanatrika ny niara-notsaraina taminy tamin'ity herinandro ity, no tena mitolona mafy indrindra amin'izy telo ireo. Niteny tamin'ny fitsarana fa nizaka fampijaliana maherihery nandritr ny telovolana voalohany nitazonana azy:
Noterena hiboridana aho ary voadaroka matetika. Noho ny hamafin'ny daroka, tsy nahavita nahafehy ny tsinaiko[sic] aho. Noterena hisotro ny amaniko aho.
Tahaka an'i Degu, nilaza momba ny hamafin'ny fampijaliana natao azy ireo tany am-ponja ihany koa i Workagenehu sy Wolde, nilaza izy ireo fa niezaka nanery azy ireo hanasonia fiaikena hosoka ireo mpiambina. Nanambara ny tatitra vao haingana navoakan'ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona fa manararao-pahefana amin'ireo mpanao gazety sy mpanohitra mpikatroka ireo mpanao famotorana sy polisy Ethiopiana mba hahazoana fiaiken-keloka:
Mampiasa fomba faneriterena amin'ireo gadra ny polisy mpanao famotoroana ao Maekelawi amin'ny fampijaliana na fikarakarana ratsy mba hahazoana fiaiken-keloka, fanambarana, sy vaovao hafa avy amin'ireo gadra. Matetika tsy avela mifandray amin'ny mpisolovava sy ny fianakaviana ireo gadra. Miankina amin'ny fanajan'izy ireo ny fitakian'ny mpanao famotorana na tsia, voasazy na omena valisoa amin'ny tsy fanomezana na fanomezana rano, sakafo, jiro na filàna fototra hafa ireo voafonja.